ओली र प्रचण्डबिच चर्किँ’दो भनाभन, को हुन् ‘असली गणतन्त्रवादी’ ? – Sadhaiko Khabar
ओली र प्रचण्डबिच चर्किँ’दो भनाभन, को हुन् ‘असली गणतन्त्रवादी’ ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष ०३, २०७८ समय: २०:०२:५२
काठमाडौं, ३ पौष / देशमा फेरि एकपटक गणतन्त्रवादी बन्ने प्रति’ष्पर्धा चलेको छ । विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुबीच को असली गणतन्त्रवादी हो भनी प्रमाणित गर्ने प्रति’ष्पर्धा नै चलेको छ ।
विशेषगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्देन कमल थापालाई परा’जित गर्दै अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि कम्युनिस्ट नेताहरु आक्रा’मक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन उदघाटनमा लिङ्देनलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ता’रो बनाएर क’डा आलो’चना गरेका थिए । उनीहरुले गणतन्त्र’विरुद्ध लागेको भन्दै चेता’वनी समेत दिएका थिए ।
पछिल्लो समय ओली प्रचण्डबीच को असली गणतन्त्रवादी हो भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रति’ष्पर्धा चलेको छ । एकले अर्कालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सह’मति गरेको आ’रोप लगाएका छन् । प्रचण्डले ओलीमाथि राजसंस्था फर्काउन खोजेको आ’रोप लगाइसकेका छन् । उनले एमाले नेताहरुले ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गरेको टि’प्पणी समेत गरे ।
ओलीले पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्डबीच सहमति भएको ठो’कु वा गरे । १८ मंसिर २०६० मा सहमति गरेको उनको आ’रोप थियो । त्यतिबेला माओवादी जन’यु’द्धमा थियो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आ’रोप ओलीले लगाएका छन् ।
ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच ५ बुँदे सहमति भएको दा’बी ओलीबाट भएपछि प्रचण्डले प्रमा’णित गर्न चु’नौ ती दिए । ओलीनिकटस्थहरुले त्यसपछि विभिन्न माध्यमले प्रचण्डको आलो’चना गर्दै आएका छन् । प्रचण्डले तत्कालीन राजासँग सम्झौ’ता गर्न लागेकाले वास्तविक गणतन्त्रवादी नभएको ओली समूहको आ’रो प छ ।
प्रचण्डले भने ओलीलाई झु’टको राजनीति गर्ने भन्दै अस’न्तुष्टि पोखेका छन् । प्रचण्डले अहिले केपी ओलीकै कारणले गणतन्त्र ख’तरामा परेको टिप्प’णी गरेका छन् । अहिले ओली र प्रचण्डबीच को असली गणतन्त्रवादी हुन् ? भनी प्रमा’णित गर्ने प्रति’ष्पर्धा चलेको छ । उनीहरु आ’रोप प्रत्या’रोपमा उत्रि’एका छन् । – रिपो’र्टर्स नेपाल बा’ट ।